Umdlalo iqala neqiniso ukuthi uhambe nge umkhumbi iziboshwa futhi uphendule imibuzo embalwa kusuka ehhovisi. Ngokuhamba le ngxoxo, uzonikwa ithuba ngokwezifiso uhlamvu lwakho. Khona-ke udinga ukuba ayokhuluma induna Graviusom. Yena, sithatha umsebenzi oyinhloko - ukuya Balmora lapho udinga ukuthola Kai Kosadesa amnike ezinye uhlobo iphakheji. Iphuzu elithakazelisayo lelo ku "Morrowind" umdlalo, okuyinto ndima kwezinye izindawo kuyoba nzima ngempela, ukuthi ibalazwe alibonisi indawo esiqondile ilitshe. Ngosizo ikhampasi, umuzwa kanye Amacebo yezakhamuzi zendawo kudingeka ngokuzimela uzulazule sezwe. Ukuze uthole ukuthi lo muzi, ukuya siltsrayderov port, bese drive ngqo Balmora. Ukusebenzisa batshele abanye izinto ezishiwo abantu, ngaphandle nobunzima ekhethekile sifuna ikhaya Kai futhi balidlulisele ezinganeni elindelwe iphakethe. Ngebanga lalokho, wathi esinazo manje umsebenzi omusha enkonzweni yasebukhosini imfihlo, ebizwa ngokuthi Blades.
Eyasiza omunye, usizo kanye ngomzuzwana!
Cishe zonke umdlalo Ukudlula "Morrowind" kusekelwe isimiso esifanayo. Nasi isibonelo esihle kule: Kai Kosades umane elihlanyiswa ekutadisheni Wezenkolo we Sixth House, futhi ngazo zonke izindlela ufuna ukuthola noma yiluphi ulwazi okuwusizo. Iyala kuba sihlangane nothile Hosfatom Anatabolisom onesifo ulwazi olulungile. "Qedani konke ekufunayo," - wathi Kai. Ngemva lamagama inothi ngenxa yokwesaba esizayo esingalindelekile esiqala enhliziyweni. Kodwa lutho esibi ngeke kwenzeke lapha. Hosfat usicela ukuya emanxiweni Dwemer futhi uthole mshini abanye ngokuthi "puzzle Dwemer." Kuyaphawuleka ukuthi imisebenzi efanayo umdlalo "Morrowind", ukudlula okubandakanya inombolo kokubili izimfuno main futhi ohlangothini, kukhona inqwaba. Endabeni msebenzi, sinikeza Hosfatu inkonzo bese ubuyela ngohlamvu ayesifuna ngabomvu ukuba Kosadesu.
Manje asikhulume mayelana amathuba kanye nenkululeko yokuzikhethela ku "Morrowind" umdlalo. Amavesi lapha akusho oda okuqinile imisebenzi bese ulandela umzila ecacisiwe. Ngakho ukuthi kukhona ngisho umdlalo akugcini emva lwendaba main! Amadolobha amaningi, izindawo ezihlukahlukene kanye nezifunda, amakhulu i-NPC, izinkulungwane izinto - zonke lezi ukubambezeleka eside futhi obhapathiza emkhathini eyingqayizivele "Morrowind". Ukudlula inhlangano lapha ithwala ngento ethile kanye nezici ezengeziwe. Ubude e Game 6 Guild: Fighters, mages, Amasela, Morag Tong, Tong futhi Kamon Blades. Ngamunye unazo yayo endaweni eziyingqayizivele ukuthunyelwa, izimfuno ehlukile, imishini, kanye nezokuxhumana. Imikhawulo futhi engekho. Umsebenzisi ungathola umsebenzi ngenxa yanoma yisiphi inhlangano. At ekuqaleni we umdlalo "Morrowind", ukudlula ogxile questing, kungase kube nezinkinga ngendlela izinkomba nama-orientation. Ngokuhamba kwesikhathi, umdlali uzofunda ibalazwe ngekhanda, futhi le nkinga ngeke zingagcwaliseki. Lona umdlalo ezithakazelisayo kakhulu futhi engavamile, uphonsa inselelo kunoma Gamer.
Ukubuyekezwa kwe uDeveli Kwangathi Cry 5 imidlalo
Izwe ethakazelisayo adventure: uhlu izimfuno engcono
Pokemon Torchik: izici futhi ukuvela kwezinhlobo
PPC Tuning e "Golf" ukuze "womjaho wasemgwaqeni"
Planet Ezinganyakazi: ukuhamba
Umzimba sezinyawo flat: umzimba eziyishumi elula
Ben Uishou (Ben Whishaw): Filmography futhi ukuphila siqu umlingisi (esesithombeni)
Canon IXUS 155 ikhamera yedijithali: i Uhlolojikelele, izici kanye nokubuyekeza
Roof liner: izici, izinhlobo nezilinganiso